वाम गठबन्धनले प्रदश नं. २ मा प्रतिनिधिसभा तर्फ खाता खोले::KhojOnline.com
वाम गठबन्धनले प्रदश नं. २ मा प्रतिनिधिसभा तर्फ खाता खोले
मंसिर, रौतहट । वाम गठबन्धनले प्रदश नं. २ मा प्रतिनिधिसभा तर्फ खाता खोलेको छ ।
रौतहट क्षेत्र नं. ३ बाट वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा खाता खोलेको हो । रौतहट-३ मा माओवादी केन्द्रक प्रभु साह विजयी भएका छन् ।
साहले २७ हजार ७९९ मत ल्याए । उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका जितेन्द्र यादवले १८ हजार १९३ मत ल्याएका छन् ।
हालसम्मको प्राप्त नतिजाअनुसार प्रदेश २ मा वाम गठबन्धन कमजोर देखिएको छ ।